Umdlali ovelele kwi-European Handball Championship eSerbia, uKatarina Bulatovic, uzolinda kuze kuphele isizini ukuthi axoxe ngokushiya kwakhe u-Oltchim Râmnicu Vâlcea. I-SportConcept, inkampani ephethe ezemidlalo umele, umemezele ukuthi kuphela ngemuva kokuphela kwemidlalo yeChampions League lapho ezoqala khona ukuxoxisana namanye amakilabhu, ngoba, okwamanje,
Yize ecele amathikithi angu-400, uFerencvaros uzofika nabalandeli ababalelwa ku-200, ngeSonto, eRâmnicu Vâlcea.Bazophelezelwa ngabaqaphi, njengoba abalandeli be-FTC babhekwa njengabanye ababuyayo kakhulu eYurophu. U-Oltchim ufuna ukuwina umdlalo wokuqala emaqenjini amakhulu eChampions League kaCristina Neagu, olimale kabi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule!Abadlali abaqeqeshwa nguJakob Vestergaard
ISpain inqobe u-26-22 (13-12) ibhekene neSlovenia kanti izodlala umdlalo wamanqamu omkhulu ngeSonto, enkampanini yaseDenmark, ehlule iCroatia ngo 30-24. Abahluliwe bazodlalela indondo yethusi ngoMgqibelo. Yomibili imidlalo yamanqamu izokuba seBarcelona. Ophethe le ndebe kuma-edishini amabili edlule, iFrance, ukhishwe kuma-quarterfinal, ehlala endaweni yesi-6
Umqeqeshi weqembu lesizwe laseRomania, uGheorghe Tadici, umemezele, ngemuva komdlalo wokugcina we-European Championship eSerbia, neGermany (23-25), ukuthi iqembu laseRomania lidlale kahle kuphela emizuzwini engama-40 edlule. Umdlalo neGerman, okuyithuba lokugcina lokuqeda emaqenjini ayisithupha okuqala eYurophu, uqale ehholo eliyincithakalo elingenalutho, lapho bekukhona nabalandeli
Ukubanjwa kwabantu ngesikhathi sokulimala eBrisbane Roar ngoLwesihlanu ebusuku kwenziwe kwaba kubi kakhulu kubaqeqeshi nakubalandeli ngendlela okwenzeke ngayo – umqeqeshi-mbulali ongahlonishwanga wephutha lomdlali onamava, uVedran Janjetovic, obesevele ebize imali yakhe amaphuzu asemaceleni enza izinqumo ezingachazeki ngesikhathi kudlalwa iSydney ekuqaleni kwesizini. umqeqeshi
Owaqopha umlando ngamagoli e-Ukraine waletha uzalo olukhulu eMilan kodwa washaya amagoli ayisishiyagalolunye kuphela emidlalweni engu-47 yePremier League kuChelsea. Iminyaka yakhe emibili e-Chelsea ibinamagoli amabili kuphela eqenjini kanye nemalimboleko yesizini eWerder Bremen. UMarcus Christenson Funda kabanziUNicolas Anelka (£ 15m, 2008-12) Enye
Kusekuseni lwe-Test yokuqala yase-England eyake yabhekana ne-Ireland mhlawumbe bekufanelekile ukuthi iphimbo, elicishe libe maphakathi nesikwele e-Lord’s, libukeke njenge-emerald luhlaza. Ngeke ngihlale ngumbala lowo isikhathi eside njengoba uzokhonjelwa umgodi ngoLwesithathu ekuseni kanye nocingo lokufudumeza ngemuva kwalokho. Yize iqembu lakhe laseNgilandi lithathe
‘Angisiyena uchwepheshe’: Umongameli weligi yombhoxo uTony Adams ubheka uPearce
U-Tony Adams uthe indima yakhe njengoMengameli weRugby Soccer League ngeke imbandakanye ukuthi anikeze izeluleko kulabo asebevele besebenza kwezemidlalo. Uzogxila kakhulu ekuthuthukiseni lo mdlalo kunokuba azame ukubamba iqhaza njengoba noClive Woodward enza lapho ethatha isikhundla komunye umdlalo. Umdlali wasemuva oneminyaka engama-52
I-sun saga ibeka isithunzi phezu kwempumelelo yokubhukuda komhlaba wase-Australia
Akukho miklomelo yokuqagela ukuthi yimuphi umdobi wase-Australia owathola amasentimitha amaningi nesikhathi sokudonsa, kungasaphathwa ukwanda okumiyo esigodini sabasubathi kuleli sonto. Futhi ukuthi – kanye neqiniso ukuthi abantu base-Australia abakwazi ukuzibonela lezi zenzo emiqhudelwaneni yezwe eseGwangju, eSouth Korea kuthelevishini – kuyinto eyihlazo.Second
UHana Green: Owesifazane wakamuva wezemidlalo oshaya umhlaba wonke e-Australia
I- Lokho kusalungiswa, kepha kulabo abalandela umdlalo eduze kule ngxenye yomhlaba Green bekulokhu kuyinhlangano eyaziwayo kusukela esemncane. U-Australia Green uwina okokuqala kwi-LPGA Championship Funda kabanzi < p> Emithonjeni yezindaba esezingeni eliphezulu nguNgqongqoshe waseWestern Australia uMinjee Lee othola inqwaba yesikhala segalofu.Futhi